Jurgen Klopp Oo Shaqsiyan U Dhammaynaya Saxeexa Xiddig Premier League Ka Ciyaara, Waxa Ka Cusub Odion Ighalo & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga - Gool24.Net
Dabcan waxaan wali si rasmi ah u furmin suuqa kala iibsiga ee xagaaga waxaana lagu jiraa bishii May balse kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub ayaa ah kuwo u tafo-xaydanaya suuqa iyagoo sii dajinaya qorshayaasha ay ku galayaan.
Si kastaba, waxaanu halkan idinkula wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo wararka ay maanta saxaafadu ka qortay dhaq-dhaqaaqa iyo halka ay wax marayaan.
Liverpool ayaa xiisaynaysa garabka ree Spain iyo kooxda Wolves ee Adama Traore iyadoo uu tababaraha kooxdaas ee Jurgen Klopp si shaqsiyan ah ula xidhiidhay. (TodoFichajes – in Spanish)
Weeraryahanka ree Nigeria iyo Manchester United ee Odion Ighalo ayaa codsaday in la kordhiyo heshiiska amaahda ah ee uu kula joogo United isla markaana uu kaga soo maqan yahay kooxda ree China ee Shanghai Shenhua (Manchester Evening News)
Heshiiska daafaca dhexe ee Arsenal ee David Luiz ayaa dhacaya bisha dambe taas oo ka dhigan in wakhtigiisii koobnaa ee Arsenal uu soo dhammaaday, 33 sano jirkan ayaysan wax heshiis kordhin ah kala hadlaynayn Gunners (Sky Sports)
Chelsea ayaa diyaarinaysa dalab 15 Milyan oo Pound ah oo ay ku doonayso goolhayaha kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Switzerland ee Roman Burki. (Sun)
Liverpool ayaan bixin doonin lacagta 50-ka Milyan ee Pound ah ee lagu jabin karo heshiiska Timo Werner oo RB Leipzig ka tirsan waxaana ay ku qiimaynayaan 24 sano jirkaas 30 Milyan oo kaliya. (Mirror)
Daafaca bidix ee kooxda Ajax iyo xulka Argentina ee ee Nicolas Tagliafico oo 27 sano jir ah ayaa heshiis 22 Milyan oo Pound ah ugu biiri kara kooxda Chelsea. (Telegraph – subscription required)
Kubad sameeyaha qaybta ka ah Barcelona balse amaahda ugu maqan Bayern Munich ee Philippe Coutinho ayaa bar-tilmaameed u ah kooxaha Premier League ee kala ah Chelsea, Newcastle, Arsenal, Manchester United iyo Leicester. (Mundo Deportivo – in Spanish)
Tottenham ayaa isha ku haysa inay kooxo dhawr ah oo ay Premier League ku xifaaltamaan ku garaacdo saxeexa 26 sano jirka AFC Bournemouth ee Ryan Fraser. (Football Insider)
Manchester United iyo Real Madrid ayaa labaduba doonaya inay la saxeexdaan 17 sano jirka Rennes ee Eduardo Camavinga (Metro)
Tottenham tababaraheeda Jose Mourinho ayaa sheegay inaysan kooxdiisu suuqa si waali ah lacag ugu bixin doonin xagaaga. (Sky Sports)
Tababarayaasha horyaalka Premier League ayaa loo sheegay in tartanka lix toddobaad oo kaliya lagu dhammaystiri doono hadddii qorshaha dib loogu bilaabayaa uu si wanaagsan usii socdo. (Times – subscription required)
Leeds United ayaa la saxeexan kara garabka Liverpool ee Harry Wilson oo amaah ku jooga AFC Bournemouth, tababaraha kooxdaas ee Marcelo Bielsa ayaa la sheegayaa inuu taageero weyn u yahay 23 sano jirkaas. (Football Insider)